चितवन माओवादीको प्रभाव क्षेत्र हो भन्नु भ्रम मात्र हो : प्रदीप ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता) « Yo Bela
चितवन माओवादीको प्रभाव क्षेत्र हो भन्नु भ्रम मात्र हो : प्रदीप ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)
नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवाली बौद्धिक र शालीन नेताका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । चितवनमा हुन लागेको पार्टीको १०औं महाधिवेशनका एजेन्डा र आगामी पार्टीको नयाँ नेतृत्वले लिनुपर्ने कार्यदिशाबारे एमाले सचिव ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीः
एमालेको आसन्न १०औं महाधिवेशन यसअघिका महाधिवेशनभन्दा के कारणले विशिष्ट र महत्वपूर्ण छ ?
यसमा धेरै पक्षहरू छन् । पहिलो कुरा भनेको यो महाधिवेशन त्यस्तो समयमा हुन लागेको छ, जहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी खडा गरिएको छ । संविधानको अपव्याख्या अनि अदालतमा सेटिङका साथै असैद्धान्तिक र अवसरवादी गठबन्धनको माध्यमबाट पार्टीलाई विभाजन गरिएको अवस्था छ । यो चुनौतीको सामना गर्न यस महाधिवेशनले चयन गर्ने नेतृत्वको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहन्छ ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिको यात्रामा भइरहेको अवरोध चिर्दै नयाँ ढंगले राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुनेछ । यिनै कारणले गर्दा म एमालेको यो १०औं महाधिवेशन यसअघिका महाधिवेशनभन्दा महत्वपूर्ण रहेको ठान्दछु ।
यो महाधिवेशनले आमनागरिकमा प्रवाह गर्न खोजेको सन्देश चाहिं के हो ?
पछिल्लो समय देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण राष्ट्रिय हितमा कतै आघात पुग्छ कि भन्ने विषयमा नागरिकहरुमा जुन चिन्ता छाएको छ, त्यसलाई चिर्दै महाधिवेशनमा देखिने उच्चस्तरको एकताले देशको राजनीति सुरक्षित छ, राष्ट्रको हित सुरक्षा गर्ने बलियो शक्ति देशमा छ र देशको लोकतन्त्र कहीँ–कतैबाट पनि तलमाथि हुन पाउँदैन भन्ने सन्देश यो महाधिवेशनले दिनेछ ।
अहिले नेकपा एमालेभित्र पार्टीलाई नेकपाको निरन्तरता ठान्ने पूर्वमाओवादी र माधव नेपाललाई खुलेर साथ दिएर पछि एमालेमै फर्किएका नेताहरु पनि क्रियाशील छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले नेतृत्वमा आउन चाहने सबै नेताहरुको आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?
नेकपा एमालेभित्र अहिले तीनवटा मनोविज्ञानलाई एकताबद्ध गर्दै अगाडि लैजानुपर्ने स्थिति छ । सुरुदेखिनै पार्टीको संस्थापनमा रहेर काम गरिरहेको एउटा मनोविज्ञान छ । अर्को माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा जोडिनुभएको कमरेडहरुको पंक्ति छ र त्यसले निर्माण गरेका एउटा मनोविज्ञान छ । र, १० बुँदे प्रस्तावपछि मूलधारमा फर्किएका साथीहरुको अर्को पंक्ति छ । नेतृत्व निर्माणमा यी तीनवटै मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखिनेछ । तर, सबैको सबै आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न भने सम्भव हुँदैन किनकि पार्टीमा योग्य नेताहरुको ठूलो पंक्ति छ । तसर्थ, पार्टीमा योग्यबाट सुयोग्य र उत्कृष्टबाट सर्वोत्कृष्ट साथीहरुको टिम बन्नेछ । यसो गर्दा यी तीनवटै मनोविज्ञान एक भएको तपाईंहरुले पाउनुहुनेछ ।
यसअघिका महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदै आएका थियो, यसपालि चाहिं के हुन्छ ?
तपाईंले चाहिं कुन पदमा उमेदवारी दिने सोच बनाउनुभएको छ ?
यो विषयमा हामी छलफलमै छौँ । यस बेला पार्टीभित्र उच्चस्तरको समझदारी खाँचो छ। छलफल र परामर्शपछि मात्र मैले मेरो उम्मेदवारीबारे सार्वजनिक गर्नेछु ।
सुरुमा एमालेको १०औं महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने निर्णय भएको थियो, पछि फेरि एकाएक महाधिवेशन चितवनमै आयोजना गरियो । माओवादी केन्द्र र उक्त पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई शक्ति देखाउन एमालेले स्थान परिवर्तन गरेको भन्ने चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?
यो बिल्कुलै होइन । एकजनाले कुनै क्षेत्रबाट एकपटक चुनाव जित्दैमा इलाका नै उसको भन्ने हुँदैन । जनमत भनेको निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ । माओवादीले स्थानीय तहको चुनावमा महानगर जितेको कांग्रेसको सहायताले हो, अझ भनौ मतपत्र च्यातेर हो । त्यस्तै, प्रचण्डले चुनाव जितेको एमालेसँगको सहकार्यमा हो । त्यसैले चितवन माओवादीको प्रभाव क्षेत्र हो भन्नु भ्रम मात्र हो ।
हामीले चारवटा क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिएका छौँ, जसमा हामी महाधिवेशनपछि केन्द्रित हुनेछौँ । पहिलो भनेको पार्टीको थप सुदृढीकरण हो । यसलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ । अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई चिर्दै पार्टीलाई सुदृढ बनाउने काम गर्नेछौं ।
चौथो चाहिं नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि मुलुकमा आर्थिक विकासको काम अघि बढ्नुको साथै समृद्धिको अभियानले गति समातेको थियो, त्यो अहिले रोकिएको छ । हामी त्यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ ।
गठबन्धनबीच स्थानीय तहमा एमालेका ११ हजार ५९७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित